Maungtintyin: သစ်တောများကို ဘာ့ကြောင့် ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြရတာလဲ?
သစ်တောများကို ဘာ့ကြောင့် ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြရတာလဲ?
ရှေးဟောင်းကျမ်းစာတစ်ခု ပြောတာက “ဘုရားသခင်ဟာ သစ်တော ဖြစ်တယ်။ သစ်တောကို မြတ်နိုးကိုးကွယ်ပါ” ဆိုတာပါ။ ယခု ဘုရားသခင်ဟာ ဘာ့ကြောင့် သစ်တော ဖြစ်လာရမှာလဲ?
သစ်တောတစ်တောထဲမှာ ရှိရှိသမျှ အရာရာတိုင်းဟာ (ဧရာမကြီးမားတဲ့ တိရိစ္ဆာန်များမှ အန္တရာယ်မပေးတဲ့ ပိုးကောင်ကလေးများတိုင်) သူတို့ရဲ့ရိပ်မြုံ ရှိပါတယ်။ ကျန်သည့် အခြားတစ်ဖက်ရှိအရာများနှင့် အသီးသီးဟာ ဟန်ချက်ညီညီ နေထိုင်ကြပြီး သင့်မြတ် အတွဲအဖက် ညီကြပါတယ်။ သစ်တောတစ်ခုထဲမှာ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှု ဇီဝလောကဟာ များများပြားပြား လုံလုံလောက်လောက် ဖွဲ့စည်းပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ နေထိုင်အခြေချသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ (အားလုံးအတွက် အများအပြား ရှိပါတယ်) မရှိမဖြစ် လိုအပ်တာထက် ပိုမိုလို့ မယူကြပါ။
အမျိုးမျိုးကွဲပြားတဲ့ မျိုးစိတ်များအတွက် ဇာတိရှင်သန်ရာ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်မြေ ရှိစေကာမူ သစ်တောများဟာ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ် အသစ်အတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်တောတစ်ခုထဲမှာ ဗြောင်းဆန်နေတဲ့ ကမောက်ကမအခြေအနေတစ်ခုကို တွေ့ရဖို့ဟာ တစ်ဦး တစ်ယောက်အတွက် တကယ့်ကြုံတောင့်ကြုံခဲပါ။ ဘုရားသခင်ဟာ သဘာဝအလျောက်ဖြစ်တဲ့ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးသူ ကိုယ်စားလှယ်များကို သတ်မှတ်ပြဌာန်း ပေးထားပါတယ်။
သက်ရှိသတ္တ၀ါတစ်ဦးအတွက် အလဟဿဖြုန်းတီးပစ်တဲ့အရာဟာ အခြားသတ္တ၀ါ တစ်ဦးဦးအတွက် အကျိုးရှိရှိအသုံးဝင်ပါတယ်။ မုချ လိုအပ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်တော တစ်တောထဲမှာ အသက်ရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့ သင်ဟာ အားလုံးအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ သဘာဝ အရ မှန်မှန်လှုပ်ရှားမှုစည်းချက်များနှင့် တေးသွားလိုက်ဖက်မှု ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘ၀ပုံစံ မျိုးစုံတဲ့ သက်ရှိတို့ရဲ့တည်ရာဘုံ ဖြစ်သည်အလျောက် အလုပ်အကျွေးပြု နေစဉ်အတွင်း- လေထုအထဲ အသက်ဆက်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်ကို ထုတ်လွှင့်ပေးကာ- ဂြိုလ်တစ်ခုလုံးရဲ့ ကောင်းကျိုးအတွက် သစ်တောတစ်တောက ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်။ အဲဒါက အနာရောဂါကိုနိုင်တဲ့ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များရဲ့ လှိုင်လှိုင်ပြည့်နှက် ကြွယ်ဝတဲ့ အရင်းအမြစ်တစ်ခုနှင့် အဏုဇီဝရုပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ တတ်ကျွမ်းဖို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အကျွန်ုပ်တို့အားလုံး အရင်သိနားလည်ရပါဦးမယ်။
သစ်တောရဲ့ဗဟုသုတကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ဆည်းပူးမိတာမရှိဘဲနဲ့တောင် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ - အဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖျက်ဆီးခြင်းကို အကြောင်းမဲ့သက်သက် ပွင့်အန်ထွက်ဖို့ ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လောဘကို လောင်စာ ဖြည့်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အတိတ်ဆီက မိုးသစ်တောဟာ ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ရဲ့ ၁၄-ရာခိုင်နှုန်းထက် များစွာ ဖုံးလွှမ်းပါတယ်။ ယနေ့အခါ ၆-ရာခိုင်နှုန်းထက် ပိုလို့နည်းပါးပါတယ်။ ယခု လောလောဆယ်နှုန်းအတိုင်း အကျွန်ုပ်တို့ သစ်တောများ သုံးစွဲခြင်းကို ဆက်လက်မပြတ် သွားနေမယ်ဆိုလျင် နောက်ထပ်နှစ် ၄၀-ခန့်မှာ ဒီဘုရားသခင်ကဲ့သို့သော ဘ၀ရဲ့ ခံနိုင်အားများ အားဖြည့်ပေးတဲ့အရာများကို အကျွန်ုပ်တို့ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။
ပညာရှင်များအလိုအရ စက္ကန့်တိုင်း စက္ကန့်တိုင်း တစ်(၁)ဧကထက်များတဲ့ အချိုးအစား နှုန်းတစ်ခုဖြင့် မိုးသစ်တောများ ဆုံးရှုံးနေပါတယ်။ နေ့စဉ် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ သစ်ပင်များ-တိရိစ္ဆာန်များနှင့် အဏုဇီဝရုပ်များရဲ့ ၁၃၇-မျိုးစိတ်ကို ဆုံးရှုံးနေပါတယ်။ သစ်ပင်များ-တိရိစ္ဆာန်များနှင့် အဏုဇီဝရုပ်များအနက် သစ်ပင်မျိုးစိတ်ထက်ဝက်ထက် များစွာဟာ- သစ်တောဖျက်ဆီးခြင်းများ လျော့နည်းရပ်စဲသွားတာ မရှိလျင်- မျိုးသုဉ်းတိမ်ကော ပျောက်ကွယ် သွားနိုင်ပါတယ်။
ရှေးဟောင်းကျမ်းစာများက ဘ၀ကို ပိုကောင်းစေတဲ့အရာများအဖြစ် သစ်တောများကို အမွှမ်းတင် ထောမနာပြုထားပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ် သွင်းပေးခဲ့တယ်လို့ သူတို့ကို သက်ဝင်ယုံကြည်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အထွတ်အမြတ်ထားအပ်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ထူးကဲဆန်းစုံကြွယ်ဝတဲ့ ဇီဝဗေဒအမျိုးအစားများကို ပေါက်ဖွားစေ ဖန်တီးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အရေးပါအရာရောက်တဲ့ ဂေဟစနစ် (အပင်နှင့်သတ္တ၀ါတို့ သဘာ၀၀န်းကျင်နှင့်လျော်ညီစွာ ဖွဲ့တည်မှုစနစ်) အနေဖြင့် အလေးထားအပ်တဲ့ တောအုပ်များကို အလေးဂရုပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့ဦးတည်ရည်မှန်းချက်ဟာ မွန်မြတ်သန့်စင်မှု ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒါက အကျွန်ုပ်တို့ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အထွတ်အမြတ်ကိုင်စွဲထားတဲ့အရာကို ဖျက်ဆီးဖို့ ထည့်သွင်းမစဉ်းစားပါ။ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့ ဦးတည်ရည်မှန်းချက်ကို အကျွန်ုပ်တို့ အမြတ်တနိုး တန်ဖို့ မထားတာလား?
ဝေဒအလိုအရကတော့ သဘာဝလက်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက် လိုအပ်ချက်ကို ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီရတနာတွေကို မတော်မလျော် ပြုလုပ်တာမဟုတ်ဆိုတာ သေချာစေဖို့- ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ဓလေ့ထုံးစံ များကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဤသို့သော ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း ဓလေ့ကို သိနားလည်ဖို့နှင့် ဆက်စပ်စဉ်းစားရမည့်အကြောင်းအရာက အဲဒါတွေကို လေးစားဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်ပါတယ်။
စိမ်းလန်းစိုပြေရေးကိုဦးတည်တဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းဟာ သစ်တောများရဲ့ ဘုရားသခင်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့သဘာဝကို ကျေးဇူးပြုအသိအမှတ်ပြုတဲ့လမ်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရှေးရှေးများက အဲဒါကို ဘ၀ဆိုင်ရာ အချင်းချင်းအကြားဆက်သွယ်တဲ့ သဘာဝကို ရိုသေလေးစားဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
မျိုးနွယ်စုယဉ်ကျေးမှုဓလေ့များမှာ လူတွေဟာ သစ်တစ်ပင်ကို ဖြတ်တောက်ခြင်း မတိုင်မီ- လျော်ကြေးနစ်နာကြေးပေးသည့်အနေဖြင့် သစ်ပင် ငါး(၅)-ပင်ကို စိုက်ပျိုးဖို့ ၀န်ခံကတိပေးကာ- သစ်ပင်ရဲ့ခွင့်ပြုသဘောတူညီချက်ကို ဖိတ်ကြားမေးမြန်း မေတ္တာရပ်ခံပါလိမ့်မယ်။ ယနေ့ မဆီမဆိုင်အပို ဆီလျော်မှုမရှိတော့သကဲ့သို့ ဒီဓလေ့ထုံးတမ်းများကို ပစ်ပယ်စွန့်လွှတ်နေပါတယ်။
အဲဒါတွေက သက်မဲ့ ဒါမှမဟုတ် သက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်အနေနှင့်- သစ်ပင်များဟာ အလုပ်အကျွေးပြုတဲ့ ၀ိညာဉ်ကို သင်္ကေတအဖြစ် ထားရှိပါတယ်။ မြင့်မြင့်မားမား မပြိုလဲဘဲရပ်တည်နေတဲ့အခါ အဲဒါတွေက ဂေဟဗေဒစနစ်ဆိုင်ရာ ဟန်ချက် ညီမျှမှုကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြီး- သေပြီးတဲ့နောက်မှာတောင် သစ်သားအနေဖြင့် အသုံးတော်ခံပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ တူညီတဲ့ကိုယ့်ကျိုးမငဲ့တဲ့ အများအကျိုးဦးစားပေးတဲ့ စိတ်ဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာကို ပြန်ပေးဆပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့က နေ့စဉ်ပြုလုပ်တဲ့ ဘ၀ပုံစံစတိုင် ရွေးချယ်စရာကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရပါ့မယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်တဲ့ ရွေးချယ်မှုဟာ- မူလအတိုင်း ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ဖို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ အရေးထား အသိရှိသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သဘာဝကပေးလာတဲ့လက်ဆောင်များကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးဖို့ ရင်ဝယ်ပိုက် ထားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“ကမ္ဘာမြေကြီးက လူသားတိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းကျေနပ်ဖို့ လုံလုံလောက်လောက် စီစဉ်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းရဲ့ လောဘအတွက်တော့ မဟုတ်” ဆိုတဲ့ မဟတ္တမဂန္ဓီရဲ့ စကားလုံးကို အောက်မေ့အမှတ်ရကြရအောင်ပါ။
အကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်တဲ့အရာထက်များစွာ ရယူဖို့ကတော့ - “ကိုယ့်ကျိုးအတ္တကို ဖျက်ဆီးခြင်းရဲ့ မျိုးစေ့”ကို စိုက်ပျိုးကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Sunday, July 10, 2011